सहसचिवहरुको सरूवा, को कहाँ पुगे ? – मुलधार न्युज
Home > समाचार > सहसचिवहरुको सरूवा, को कहाँ पुगे ?
१५ भाद्र २०७६, आईतवार १३:४४
काठमाडौं– सरकारले अर्थ मन्त्रालयका केही सहसचिवको सरूवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका सहसचिव विनोद कुँवरलाई आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । शुक्रबारको निर्णयबाट कुँवरलाई विभाग पठाइएको हो ।
अर्थकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुमन दाहाललाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । भन्सारका महानिर्देशक रहेका रामेश्वर दंगालको सरूवा भएपछि रिक्त स्थानमा दाहाललाई पठाइएको छ ।
अर्थको प्रशासन महाशाखामा सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको सरूवा भएको छ । मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय प्रमुख रहेका उनी यसअघि प्रशासनमै उपसचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरलाई मध्यास्तरी करदाता कार्यालय प्रमुख बनाइएको छ । तत्काललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख खाली राखिएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ढुण्डीप्रसाद निरौलालाई पठाइएको छ । त्यहाँ कार्यरत श्यामप्रसाद भण्डारीलाई भन्सार विभाग ल्याइएको छ । भन्सार विभागबाट तुलसीराम सेढाईलाई अर्थ मन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा पठाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेललाई अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखमा सरूवा गरिएको छ ।
यू–१९ एसिया कपको तालिका सार्वजनिक